Mijanona ao amin'ny Farihin'i Onega
Ny Repoblikan'i Karelia , ny Vologda sy ny Faritra Leningrad dia mitazona ny hakanton'izy ireo Rosiana mamirapiratra ny hatsaran-tarehin'ny farihy iray, izay misy renirano 50 eo ho eo, ary ny faritra, ankoatra ny faritany manana natiora, dia mitondra vesatra tanàna maro mahafinaritra. Any Eoropa manontolo, saingy indrisy fa tsy eto amin'ity izao tontolo izao ity , dia eo amin'ny dingana faharoa amin'ny ambaratonga. Ny fitsangatsanganana mandritra ny taona maro ao amin'ny Onega Lake dia karazan'olona tia karazana maro, satria rano mangatsiatsiaka be dia be izy ary voantso mba hiongana ao amin'izy ireo ary hanadino ny tabataba sy ny sigara any amin'ireo tanàna lehibe, mba hanesorana ny tebitebin'ny saina sy ny reraka isan-karazany. Ny fialofana eo amin'ny moron-dranomasina sandoka na eo amorom-patana ao Onega Lake dia tsy afaka manimba ny firaisan-kina miaraka amin'ny natiora, satria tena mahafaly tokoa ny fahafahana mahita ny fomba fijery tsara sy ny fireneny.
Fialan-tsasatra amin'ny farihy Onega Lake
Amin'ny lohataona, ny toetr'andro sy ny toetry ny tany lemaka Rosia dia mampifanaraka ny natiora mahafinaritra sy ireo mpirotsaka an-tsehatra hampihetsika fitsaharana, izay manome fahafinaretana ny Onega Lake, tsara kokoa amin'ny fahavaratra. Amin'izay fotoana izay dia tsy hampatahotra anao ny maraimbe mialoha ny maraina eo amin'ny hazo mozika ary misambotra ny rivotra marefo amin'ny rivotra rehefa miampita ny sambokely mankany amin'ny iray amin'ireo nosy maro. Ny fahavaratra dia fotoana mahavokatra mandeha amin'ny làlana tsy mandeha eny amoron-dranomasina, misy tara-pahavaratra misy rano maranitra, nefa rano madio, izay toerana tiany hanamboarana ny toerana ho toerana mahafinaritra indrindra. Ary ny hatsaran-tarehin'ny fahavaratra dia mitoloko, rehefa ny masoandro, toy ny perla mangidy, mandro amin'ny hazavana mavokely, manidina ambony, manenjika ny haizim-pitaintainana amin'ny alina ary manazava ny andro mahafinaritra vaovao, dia sarotra alaina sary an-tsaina raha tsy mahatsapa izany.
Amin'ny làlana amoron-dranomasina, mbola akaiky kokoa, azontsika tsoahana fa ilay mandray vahiny ao amin'ny Onega Lake dia mandray ny fitsaharana amin'ny tranolay. Be dia misy toby fonenana sy toeram-piantsonana maro no miparitaka manerana ny ala mikitroka, ary misy tranolay kely hita eny amin'ny sisin'ny rano. Na dia eo aza ireo karazana fialamboly maro isan-karazany, toeram-pialam-boly, tobim-pahasalamana, tranom-pahamarinana tsy manam-pahataperana, fitsangatsanganana ao Onega Lake ho olompirenena dia mbola mahazatra indrindra, satria tsy dia misy fiantraikany ara-bola loatra izany, maivana kokoa ary mazava ho azy. Ny tena manan-danja dia ny manakana ny anaran'ny fiarovana, fa tsy any amin'ny kirihitra lavitra, fa eo akaikin'ny tobim-pahaizana manamorona orinasa efa misy.
Mahafinaritra ny hatsaran-tarehy natiora ka mahatonga azy ireo hizotra ho an'olona an-jatony, kilaometatra an'arivony maro mba hahatsapa ho an'ny fialantsasatra fohy miaraka amin'ny hery mampientam-po marevaka, mitaingina sambo mpizahatany, mankasitraka ireo onjam-peo efa ela teo amin'ny Onega, ary raha tsy mandray anjara, dia farafaharatsiny mba hampihetsi-po ny masonareo amin'ny fisehoan-javatra mahatalanjona - ny fitaterana an-tsambo isan-taona any Onego, izay nampiavaka ny anarana taloha amin'ity farihy goavana ity.
Fialantsasatra miaraka amin'ny alika any an-dranomasina
Monastera ao Rosia
Tonizia - toetrandro
Inona no hitondrana an'i Meksiko?
Ny volkano ambony indrindra eran-tany
Pattaya na Phuket - iza no tsara kokoa?
Kroasia - visa ho an'ny Rosiana 2015
Nosy Kanaria - isaky ny volana
Hongria, Lake Heviz
Vokatry ny vary
Vita amin'ny fantsona boribory
Ny rafitra Tabata
Tazo mitahiry fako miaraka amin'ny banana
Ny Valan-javaboarin'i Beit Guvrin
Gaga be! Teraka "bevohoka" ny zandriny lahy ilay zazalahy!
Igrerefleksoterapiya - fampahafantarana sy ny fanoherana
Ny boky tsara indrindra eran'izao tontolo izao
Fitsipika fitondran-tena ao an-tsekoly
Nahoana no malahelo ireo oviana?
Ilay Shiller Doherty, izay miady amin'ny homamiadana, dia miandry ny fitsarana!
Vavaka ho an'ny Hazofijaliana mahavelona
Hamaekiparis - fikarakarana tokantrano
50 vokatra tsy mahazatra indrindra ao amin'ny toeram-pivarotana fivarotana
Tavoahangy misy alikaola
Kitapo setroka - rafitra maoderina
Potato miaraka amin'ny hena ao anaty lafaoro
Reraka Kate Middleton: bevohoka na tsy natory tsara?